एमाले स्थायी कमिटी बैठक अनिश्चित कालका लागि स्थगित - नेपालबहस
एमाले स्थायी कमिटी बैठक अनिश्चित कालका लागि स्थगित
| १५:०३:०२ मा प्रकाशित
२० जेठ, काठमाडाैं । नेकपा एमालेको ओली पक्षले आजका लागि बोलाएको स्थायी कमिटी बैठक अनिश्चित कालका लागि स्थगित गरेको छ । आज साँझ बोलाइएको बैठकले माधव नेपाल पक्षका नेताहरुको कारबाही लगायत विषयमा निर्णय गर्न सक्ने बताइएको थियो ।
साथै, प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल पक्षका केही नेताहरु ल्याएर बलियो बन्ने प्रयास समेत गरिरहेका छन् । यही विषयमा केही प्रष्ट चित्र आओस् भनेर आजको बैठक स्थगित भएको स्रोतले जनाएको छ ।
उता, नेपाल पक्षले पनि आजै केन्द्रीय कमिटी बैठकको आयोजना गरेको छ । भर्चुअल प्रविधिबाट बैठक गरिएको हो । बैठकमा सहभागी नेताहरुले ओलीको वार्ता नाटक मात्र भएकाले उनको चालमा नफस्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
बैठकमा सहभागी घनश्याम भूषाल र सुरेन्द्र पाण्डेले समेत ओलीको चालबाजीमा फस्न नहुने धारणा राखेका छन् ।
माधव नेपाल फकाउने ओली रणनीति ३ दिन पहिले
उपचारको आशमा पूर्वलडाकु परियार भर्खरै
पहिरोका कारण सिद्धार्थ राजमार्ग अबरुद्ध ५ मिनेट पहिले
संक्रमणको उच्च जोखिमका कारण पनौती जात्रा स्थगित २२ मिनेट पहिले
बेलायतले जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा दिने सहायता बजेट कटौती ३३ मिनेट पहिले
कालीगण्डकीमा आएको बाढीले सेतीवेणीका ८ घर डुबानमा ४५ मिनेट पहिले
एनसीसी बैंकको शेयरमा खरीद चाप उच्च ४८ मिनेट पहिले
बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहत कार्य प्रभावकारी बनाउन प्रचण्डको आग्रह ५२ मिनेट पहिले
डाइभर्सनले पूर्वपश्चिम राजमार्गमा यातायात सञ्चालन गर्न सास्ती ५९ मिनेट पहिले
चितवन निकुञ्जको पश्चिमी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी १५४ गैँडा भेटिए ६ दिन पहिले
अब सबै रिट संवैधानिक इजलाशमा ३ हप्ता पहिले
आयोगलाई निर्वाचनको तयारीमा जुट्न ओलीकाे निर्देशन ४ हप्ता पहिले
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि १ खर्ब बिनियोजन ३ हप्ता पहिले
निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने २,७२० सवारीसाधन प्रहरीको नियन्त्रणमा २ हप्ता पहिले
डिम्याट खाता के हो ? कसरी खोल्ने ? ४ हप्ता पहिले
बागलुङ बाढी–पहिरो : दुई महिना बित्यो, बेपत्ता १५ भेटिएनन् ७ महिना पहिले
रामकृष्ण ढकाललाई सानुको याद आयो ४ महिना पहिले